Beesha Ugaadh Abokor (Sacad Muuse) waxay ay ka mid beelaha dega dalka Somaliland , gaar ahaan Gobolada galbeedka ama gobolada, Maroodi-jeex, Gobolka Gabiley iyo Deegaanad hoos yimaada labadaa gobolka, gaar ahaan , galoolay, kaambarwaaqo, Caraale, Harcadaad, Waraabalay, Degamada Allaybaday , Gabiley.
Beeshani iyadoo ka qayb-qaadatay halgankii Dheeraa ee dalka loo soo maray, dhismihiisiina doorkeeda ku lahayd, dhib kastana kala mid ahayd Bulshooyinka kale ee dalka wada dega, waxa jirta inaanay 27-kaa sannadood ee Somaliland jirtay wax saami-siyaasaddeed ah ku yeelan dalka.
Haddaba su’aasha is waydiinta lihi waxay tahay, waa maxay sabata loogu magaabi waayay wax xil ah mudadii ay Somaliland jirtey, iyadoo aynu ognahay in xataa dadka laga tirad badan yahay lagu xisaabtamo.
Su’aalaha kale ee ay is weydiinayaan dhalinyarada , cuqaasha, wax garadka iyo aqooyanaka beeshani waxa weeyi, ma mujaahidiin baydaan lahayn oo dalka ayay daan usoo dagalaamin, ma aqooyahan ayay daan lahay, Ma dad guurtiya ayay daan lahayn, ma laandheere nimaa xilka lagu helayaa?. Intaas mid kamid ah hadday tahay waxaa markhaati ma doon ah in ay waxaaso dhami jiraan laakin aananay cidi dhageysan ee xuquuqdii ay lahaayeen ama ssaamiigii ay laahayen laga dulmay.
Haddaba iyadoo aynu wada ognahay in xukuumaddihii waddanka soo maray oo dhami aanay habayaraate wax xil ah noo magaabin, su’aasha aanu mar kale isweydiinaynaa waxa weeye dawlada haatan talada dalka haysa oo aan si gaar rejjo uga qabnay inay saami fiican na siiso ay noo duudsiday ee aanu uga waynay caadaladii aanu ka filaynay.
Ugu dambeyn , waxaan cabasho guud u direynaa dhamaan golayaasha , Qaran ee uu k ow ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi oo aanu leenahay madaxweyne miyaannaan ahayn dad dalkan xaq ku leh, mise miyaannaan ahayn dad ree somalilanders…..waa maxay sababtu…..dhamanaba golayaasha qaranku wax garadka dalku waa in ay cabashayada hoos u eegaan…
Cabdikhadar Maxamed Aw-Suubiye…
Previous: Warbixin: Adoonsiga ka jira Liibiya
Next: Somaliland: 24 sanno ka ayaa la aasaasay Ciidanka Qaranka